NOSY BE HELL-VILLE : Tra-tehaka ireo 3 lahy saika hanondrana volamena an-tsokosoko
Efa malina tanteraka amin’ny asany ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny miasa eny anivon’ny seranam-piaramanidina manoloana ireo tranga miseho isan-karazany toy ny fanondranana entana an-tsokosoko any ivelany misesilany. 22 août 2019
Raha ny fanazavana voaray, misy ny tsy fahatomombanana indraindray saingy miezaka hatrany izy ireo manatsara ny fomba fiasa mba hanatratrarana ireo olona mpanao izany. Araka ny loharam-baovao voaray, tratran’ny vela-pandriky ny polisim-pirenena tao amin’ny seranam-piaramanidina Fascene Nosy Be Hell-Ville ireo 3 lahy avy eto Antananarivo raha niketrika teti-dratsy hanondrana an-tsokosoko volamena ho any ivelany. Ny fanazavan’ireo polisy no nanambara fa mpamafa sy mpanondrana entana amin’ny fiaramanidina any an-toerana no mitondra ireo volamena ireo, satria izy ireo tsy savaina na tsy mandalo "scanner".
Matetika saika toy izany hatrany no fomba fanaon’ireo olon-dratsy. Efa nisy tafavoaka teto Madagasikara ireo ampaham-bolamena ireo fa tapany no fantatra izay mbola ao Nosy Be. Nihoatra ny fe-potoana tokony hahatongavan’io volamena io tany ivelany, hany ka nahazo antso avy amin’ny finday ny mpiasa tao amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fascene ao Nosy be. Nanomboka teo ny famotorana rehetra no niainga ka rehefa notanterahin’ny teo anivon’ny Polisim-pirenena ny fisafoana ny toerana fandraisam-bahiny nipetrahan’ireto jiolahy ireto dia mbola hita teny amin’izy ireo ny fitaovana maromaro. Ao anatin’ny fanohizana ny fanadihadiana lalina momba ny raharaha ny Polisy amin’izao fotoana izao.